.: " လားရှိုးသိန်းအောင်နှင့် တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခြင်း "
" လားရှိုးသိန်းအောင် နှင့် Fancy journal မှတွေ့ ဆုံမေးမြန်းခြင်း "
Fancy journal အတွဲ (၁ ) ၊ အမှတ် (၇ )
လားရှိုးသိန်းအောင် ခေါ် Jimmy Jack ဟာ အမေတခုသားတခု၊ မုန်းမုန်းမေ့မေ့၊ နှုတ်မဆက်နဲ့၊ တောင်ကြီးမြို့ဧည့်သည်၊ ဘ၀သစ္စာ စတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ တချိန်က မြန်မာ့ စတူရီယို ခေတ်ဦးလောကမှာ အောင်မြင်မှု မှတ်တိုင်တခု အခိုင်အမာ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီးမှ အနုပညာလောကကနေ ရုတ်တရက် ပျောက်သွားခဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် တလောကတော့ အင်တာနက် Youtube တွေပေါ်ကတဆင့် လွှတ်တော်အမတ်တွေကြားမှာပါ အတော်လေး ရေပန်းစား၊ ရိုက်ခတ်သွားခဲ့တဲ့ သမ္မတကြီး (ဦးသိန်းစိန်) ဂုဏ်ပြုသီချင်းကို ကိုယ်တိုင် ရေးသား သီဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပရိတ်သတ်တွေအကြား လားရှိုးသိန်းအောင်ဆိုတဲ့ နာမည် တဖန် ပြန်လည် နိုးထလာပြန်ပါတယ်။ လားရှိုးသိန်းအောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် သေသလား၊ ရှင်သလား၊ ဘယ်ရောက်နေသလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်း တချိန်က အယူအဆ အမျိုးမျိုး ရှိနေခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ Texas ပြည်နယ်၊ Houston မြို့မှာ မိသားစုနဲ့အတူ အခြေချ နေထိုင်နေတဲ့ လားရှိုးသိန်းအောင်ကို Fancy ဂျာနယ်က သီးသန့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး။ ပထမဆုံး မေးချင်တာက ဦးဂျင်မီ အနေနဲ့ မြန်မာပြည်ကနေ ဘယ်နှစ်ခုနှစ်က ထွက်သွားတာပါလဲ။ ဘာကြောင့် ထွက်သွားတာပါလဲ။
ဖြေ။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှာ တောခိုသွားခဲ့တာ။ အဓိကတော်လှန်ရေးပါ၊ ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကို လက်မခံတာရယ်၊ စွန့်စားခန်း ဝါသနာပါတာရယ်ပေါ့နော်။
မေး။ အခု အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ Texas ပြည်နယ်မှာ အခြေချ နေထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ မြန်မာပြည်ကထွက်သွားကတည်းက အမေရိကန်နိုင်ငံကို တန်းသွားတာလား။
ဖြေ။ တောထဲမှာ တနှစ်ကျော်၊ ယိုးဒယားမှာ တနှစ်ကျော်၊ ပြီးတော့မှ အမေရိကန်နိုင်ငံ Texas ကိုရောက်ခဲ့တာပါ။
မေး။ ပြည်ပမှာနေတဲ့ကာလတလျှောက် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လုပ်ဖြစ်ပါသလား။ ဘာတွေများ လုပ်ဖြစ်ပါသလဲ။
ဖြေ။ US ကိုပထမဆုံးရောက်တော့ Night Club မှာသီချင်းဆိုဖြစ်တယ်လေ၊ အိမ်ထောင် ကျပြီးမှ တခြားအလုပ်ဆက်လုပ်ပါတယ်။
မေး။ မြန်မာပြည်မှာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ရော။
ဖြေ။ အမိမြေကမိန်းကလေးတွေ စိမ်းကားတော့ အသဲကွဲ၊ အသဲကွဲမှဘဲ သီချင်းတွေက အသက်ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်။
မေး။ ဒီနေ့ခေတ်အထိ ဦးဂျင်မီရဲ့ သီချင်းတွေကို နောက်တက်လာတဲ့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေ ပြန်ဆိုနေကြတဲ့အပေါ်မှာရော ဘယ်လိုမြင်လဲ။ အထူးသဖြင့် ဘယ်တော့မှ မရိုးနိုင်တဲ့ “အမေတခု သားတခု” လို သီချင်းမျိုးပေါ့။ ဒီသီချင်းကို ပြန်ဆိုတိုင်းလဲ အောင်မြင်နေတာကို တွေ့ရလို့ပါ။
ဖြေ။ ကျနော်သီချင်းတပုဒ်တင်လိုက်ပြီဆိုရင် အားလုံးအတွက်ပါ။ သူတို့ဆိုလေ ပိုကောင်းလေပေါ့။ မှူပိုင်ရယ်လို့တော့ ချုပ်ခြယ်မထားပါဘူး။ ပြန်ဆိုတိုင်းအောင်မြင်တယ်ဆို တော့ဝမ်းသာစရာဘဲလေ။
မေး။ သီချင်းတွေကို ဦးဂျင်မီ ကိုယ်တိုင်ရေးလေ့ရှိလား။ သီချင်းတွေကို ဘယ်လို ရွေးချယ်ခဲ့သလဲ။
ဖြေ။ ကျနော့သီချင်းတွေက ကျနော့ဘဝဇါတ်လမ်း ပုံရိပ်တွေပါ။ ကိုယ်တိုင်ရေးပြီး ဆိုတယ်ဆိုတော့ ပိုအသက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်။ တချိန်ကအချစ်သီချင်းလေးတွေ ခံစားချက်လေးတွေ၊ ခုတလော နိုင်ငံရေးနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက်ဘဲလေ။
မေး။ လက်ရှိ မိသားစုအခြေအနေလေးလဲ သိပါရစေ။ ဦးဂျင်မီမှာ သားသမီး ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ လက်ရှိမိသားစုက US မှာ၊ US ကပါ။ သားနှစ်ယောက်၊ သမီးလေးတယောက်ပါ။ အိမ်ထောင်တော့မကျကြသေးဘူး။ ခလေးတွေက လိမ္မာတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး မလုပ်ကြဘူး။ အဖေလိုဘဲဆေးလိပ်မသောက်၊ အရက်မသောက်ဘူး။ အမျိုးသမီးကတော့ အမေရိကန်မလေးပါ။
မေး။ သားသမီးတွေထဲမှာရော ဦးဂျင်မီလို ဂီတတို့၊ အနုပညာတို့ဘက်ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေပါလား။
ဖြေ။ သူတို့တွေအားလုံးအနုပညာဝါသနာအိုးတွေပါ။ မောင်နမတွေ အားတဲ့အခါ Rock, Heavy, Country စုံလို့ပါဘဲ ပျော်စရာကြီးပါ။
မေး ဦးဂျင်မီအနေနဲ့ မြန်မာ ပြန်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိလား။ ပြန်မယ်ဆို ဘယ်တော့လောက်ပြန်ဖြစ်မလဲ။
ဖြေ။ US မှာ (၃၇) ကြာပေမဲ့ နိုင်ငံခြားသားအယူမခံသေးပါဘူး။ အမိမြေပြန်လာဘို့ ဆိုတာလဲ ပြည်ဝင်ခွင့် ပေးရင်တော့လာခြင်တာပေါ့ဗျာ။ လာဖြစ်ရင်လဲ မေမေ့ကို ကန်တော့ဘို့ပါဘဲ။ မေမေက (၉၈) နှစ်ပြည့်ပြီလေ။
မေး။ မြန်မာပြည်ပြန်ရင် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လုပ်ဖြစ်မလား။ မြန်မာပြည်မှာ တခြား လုပ်ချင်တဲ့၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းမျိုးရော ရှိပါသလား။
ဖြေ။ အနုပညာချစ်မြတ်နိုးသူဆိုတော့ ပြောလို့မရဘူးလေ။ လူမှုရေးကတော့ တိုင်းပြည်ကတာဝန်ပေးမယ်ဆိုရင် အခကျေးမယူဘဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာပါ။ မေး။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ မြန်ဆန်စွာ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဂီတလောကအပေါ်မှာ ဦးဂျင်မီရဲ့အမြင်လေးလဲ ပြောပြပါဦ။ ဖြေ။ ခေတ်နဲ့အလိုက်ဆိုသလို ပြောင်းလာမှတော့ လက်ခံရမှာပေါ့ဗျာ။
မေး။ ဂီတနဲ့ အနုပညာအပေါ် ဦးဖြတ်သန်းလာတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအရ ဦးရဲ့ခံစားချက်၊ အမြင်လေးတွေလည်း သိပါရစေ။
ဖြေ။ ကျနော်ကလေ စားပွဲတလုံးမှာထိုင်ပြီး သီချင်းရေးမယ်ဆိုရင် မရတာအမှန်ဘဲ။ Feeling ဝင်ရင်ဝင်သလို (၅) မိနစ် (၁၀) မိနစ်အတွင်း စာသားရော သံစဉ်ပါရတယ်။ ခံစားချက်အတွေ့ အကြုံလေးတွေပေါ့ဗျာ။
မေး။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး ပြောင်းလဲမှုတွေအပေါ် ဦးဂျင်မီရဲ့ အမြင်ဘယ် ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ နိုင်ငံအပြောင်းလွှဲကတော့ လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီဘဲ။ ကျနော်တို့အားလုံးက ယုံကြည်စိတ်ချပြီး ဝိုင်းဝန်းကူညီကြဘို့လိုတယ်။ ဒီအဖြေလေးတွေနဲ့ဘဲ ကျေနပ်ပါတော့နော်။ အော်. . . . . . ဒါနဲ့ . . . . . . . မြေအိုးထဲက ရေအေးလေး တခွက်လောက်။ ကျေးဇူးပါ၊ မင်္ဂလာပါခင်ဗျား။
လားရှိုးသိန်းအောင်ဟာ မကြာခင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာပြီး ကျေးဇူးရှင် မွေးသမိခင်ကြီးကို ဂါရ၀ပြုရင်း သူချစ်မြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လုပ်ချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ အခကြေးငွေမယူဘဲ နယ်လှည့် ဖျော်ဖြေပွဲတွေအပါအ၀င် တခြား လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပြီး မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် လုပ်ပေးချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Labels: ကျမရဲ့အိမ်မက်တွေ, အမှတ်တရပုံရိပ်လေးများ
" လားရှိုးသိန်းအောင်နှင့် တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခြင်း ...
ဦးဝင်းဖေနှင့်အင်တာဗျူး (Fancy Vol.1 No.6)
FANCY JOURNAL အမှတ် ( ၆ )